Thwebula Wikipedia 2.0 – Vessoft
Wikipedia – a software ukufunda encyclopedia emhlabeni ngobukhulu ulwazi Wikipedia. Isofthiwe ikuvumela ukubuka izihloko ezintsha, amakhasi alondoloziwe, ukuphequlula umlando nibuke landmarks eliseduze. Wikipedia ivumela ukufunda izihloko ngezilimi ezahlukene, ukugcina ikhasi, ukucinga ikhasi, ukushintsha font, isihloko njll software kwenza ukwabelana ngolwazi nge izicelo ezahlukene noma uxhumano wireless. Wikipedia ivumela ukuba bandise izilungiselelo futhi ngemvume nge-akhawunti yakho.
Ukufundwa Easy of encyclopedia popular
Amandla ukufunda izihloko ngezilimi ezahlukene
Yonga umlando amakhasi and ukuphequlula
Ikhono ukwabelana ulwazi zokusebenza ezahlukene
Amazwana on Wikipedia:
Wikipedia Ahlobene software:
English, Русский, العربية, Bahasa Indonesia... BBC News 3.7.1.9
English, Français, Español, 中文... Uber 3.131.4
English, Українська, Français, Italiano... ColorNote 3.10.6